Ukwehla kwe-9 degrees kulindeleke eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kudlula kushisa? Iqiniso liwukuthi sibe nesiqalo esifudumele kakhulu kuSepthemba kunokujwayelekile, ngamazinga okushisa aphakeme kakhulu kucatshangelwa inyanga esikuyo: Ama-43,1 degrees i-centrigrade yabhaliswa eGranada ngosuku lwesi-6, 38ºC ngomhla ka-5 e-Ibiza noma I-45,4ºC esikhumulweni sezindiza saseCórdoba nangomhlaka 5.
Kodwa lesi simo sizoshintsha kusukela namuhla ngoLwesihlanu. Eqinisweni, amazinga okushisa kulindeleke ukuthi ehle aye Ama-9 degrees ngempelasonto, okuzosisiza nakanjani sizizwe sengathi ukuwa sekuseduze.
UModesto Sánchez, okhulumela iState Meteorological Agency, uchaze ukuthi ngoMgqibelo nangeSonto sizophila »ukuvalelisa ehlobo», Ngaphandle kokuthi usuku lokugcina lweviki kuzoba nokubuyela okuncane emazingeni okushisa.
NgoLwesibili i-13, ukwehla okujwayelekile kulindeleke, nokungazinzi emkhathini okuzosishiya nemvula nesibhakabhaka esinamafu ezingxenyeni eziningi zezwe, amanzi ngokungangabazeki azokwamukelwa kahle kakhulu kuleyo miphakathi lapho kungakaze line khona, njengeCatalonia, iBalearic Islands, noma iMadrid.
Lezi izibikezelo ze- I-AEMET ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo:
1 Ukubikezela ngoLwesihlanu, Septhemba 9
2 Ukubikezela ngoMgqibelo, Septhemba 10
3 Ukubikezelwa kweSonto, Septhemba 11
Ukubikezela ngoLwesihlanu, Septhemba 9
Namuhla, kulindeleke ukuthi kube namafu aguqukayo okuvela kokushona kwezinsuku engxenyeni esempumalanga yenhlonhlo, okungenzeka kube nemvula neziphepho eCatalonia, enyakatho ye-Aragon naseningizimu yohlelo lwe-Iberia. Amazinga okushisa azoncipha ePyrenees, engxenyeni eseningizimu yenhlonhlo naseCanary Islands; kokunye bazovuka kancane.
Ukubikezela ngoMgqibelo, Septhemba 10
NgoMgqibelo izinto zizoqala ukushintsha ezweni lonke. Kulindeleke isibhakabhaka esiguqubele ezingxenyeni eziningi zenhlonhlo, kanye nakulezi ziqhingi ezimbili. Ingana enyakatho yeCatalonia. Amazinga okushisa azokwehla.
Ukubikezelwa kweSonto, Septhemba 11
NgeSonto kulindeleke amafu enyakatho yeGalicia nasentshonalanga yeCantabrian Sea, nasePyrenees, ingxenye yesithathu esempumalanga yenhlonhlo, naseziQhingini zaseBalearic, lapho kungahle kube khona ishawa. Engxenyeni eseleyo yenhlonhlo isibhakabhaka sizohlala sicwebile noma kunamafu aphakeme. FUTHI eziqhingini zaseCanary kwakungase line eziqhingini zosizo olukhulu.
Amazinga okushisa aphezulu azokhuphuka enyakatho nasenkabeni yePeninsula, kuthi engxenyeni eseningizimu anciphe.
Ngakho-ke, kuncane ukusho ukuvalelisa ehlobo 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ukwehla okufika kuma-9 degrees ukuqeda ukushisa